निराहार” माने उपवास । | Nepali Christians
निराहार” माने उपवास ।
November 10, 2014 12:32 pm by: Nepali Christians Category: Sermons A+ / A-
के हो त उपवास ?
उपवास भनेको कुनै पनि खाने वा पिउने कुरा (ठोस तथा तरल पदार्थ) नखाई कन नपिइ कन एक दिन पुरै वा सो भन्दा बढि वस्ने तरिकालाई नै उपवास भनिन्छ । “गएर शूशनमा भेट्टाएका जति सबै यहूदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। तीन दिन र तीन रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस्। म र मेरा चाकर्नीहरू पनि तपाईंहरूजस्तै उपवास बस्नेछौं।”(एस्तर ४:१६) जसरी मोशाले पनि गरेको थियो (प्रस्थान ३४:२८ “मोशा त्यहाँ परमप्रभुसित चालीस दिन र चालिस रात रहे । तिनले नता रोटी खाए न पानी पिए ।” दोस्रो चोटीको उपवासको बारेमा मोशा आफैले भनेका छन् “म पहिलेझैं चालीस दिन र चालीस रातसम्म परमप्रभुको अगि लम्पसार परिरहें । मैले रोटी वा पानी खाइनँ ।” (व्यवस्था ९:१८) पावलले पनि तिन दिनसम्म खाएनन् र पिएनन् (प्रेरित ९:९) उपवासको बारेमा भन्नु पर्दा यो आत्मीक जीवन जिउनको लागि एउटा अनुसासन हो । जसमा आफ्नो मन, हृदयलाई एकत्रित गराएर उपवास सहित प्रार्थनामा बसीन्छ, जसबाट परमेश्वरसँगको हाम्रो आत्मीक सम्बन्ध बढाउने काम गर्छ ।
बाईबलमा उपवासका केहि उदाहरणहरु
– ईजराईलीहरुको पापको कारण मोशा ४० दिन उपवास बसे (व्यवस्था ९:९, १८, २५–२९ र १०:१०)
– शाऊलको मृत्युमा दाऊद उपवास बसे (२ शमूएल १:१२)
– अबनेरको मृत्युमा दाऊद उपवास बसे (२ शमूएल ३:३५)
– आफ्नो बालकको मृत्युमा दाऊद उपवास बसे (२ शमूएल १२:१६)
– ईजेबेल देखि एलिया भाग्दा ४० दिन उपवास बसे (१ राजा १९:७,८)
– आहाबले परमेश्वरको सामु दीन तुल्याउन उपवास बसे (१ राजा २१:२७–२९)
– दाराले दानिएलको फिक्री गरेर उपवास बसे (दानिएल ६:१८–२४)
– जब दानिएलले यर्मिया अगमबक्तालाई दिएको परमेश्वरको वचन पढे तब यहुदाको पापको लागी उपवास बसे ( दानिएल ९:१–१९)
– दानिएलले परमेश्वरबाट रहस्यमय दर्शनको अर्थ पाउन उपवास बसे (दानिएल १०:३–१३)
– आफ्ना मानिसहरुका लागि एस्तरले उपवास बसे (एस्तर ४:१३–१६)
– एज्राले कैदबाट फर्केर आएकाहरुका निम्ति विलाप गर्दै उपवास बसे (एज्रा १०: ६–१७)
– नहेम्याहले यरुशलेमको पर्खाल भत्काईएको खबर सुनेर विलाप गर्दै उपवास बसे ( नहेम्याह १:४–२:१०)
– निनवेमा भएका मानिसहरुले योनाको खबर सुनेर उपवास बसे (योना ३:१–१०)
– हन्नाले यरुशलेमको उद्धारको लागि आउनुहुने मसीहको निम्ति उपवास बसे (लूका २:३७)
– प्रभु येशू आफु परिक्षित हुन र सेवकाई सुरु गर्न पहिले ४० दिन सम्म उपवास बस्नु भयो (मत्ती ४:१–११)
– बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरु उपवास बस्द थियो (मत्ती ९:१४–१५)
– पावल र बारनाबासलाई प्रचारमा पठाउन अघि उपवास बसे (प्रेरित १३:१–५)
– कर्नेलियसले उपवास बसेर प्रार्थना गरेर दर्शन पाय (प्रेरित १०:३०)
– पावल तिन दिन सम्म उपवास बसे (प्रेरित ९:९)
– पावलको समुन्द्री यात्रामा १४ दिन सम्म उपवास बसे (प्रेरित २७:३३–३४)
उपवास किन बसिन्छ ?
१ आफुलाई तयार पार्न र आत्मीक ताजा पन ल्याउन । (मत्ती ४:१–११)
२ आत्मीक लक्ष्य तयार गर्न । (प्रेरित १४:२३)
३ बन्धनबाट छुट्कारा पाउँन । (यशैया ५८:६)
४ बरदान थाहा पाऊन वा बोलावट थाहा पाऊन । (प्रेरित १३:२)
५ शक्ति पाऊन । (मत्ती १७:२१)
६ आश्चर्यकर्म गर्नको लागि । (मत्ती १७:२१ दानिएल १०:३–१३)
आत्मीक उपवास के होईन ?
कति पय विश्वासीहरु उपवासको सेवाकाई चलाऊछन् तर त्यसको साथ–साथै भोज पनि तयार गर्छन् के त्यो उपवास होला त ? (जकरिया ७:५–६)“देशका सारा मानिसहरु र पूजाहारीहरुलाई यसो सोध, जब तिमीहरु यी सत्तरी वर्षसम्म पाँचौं र सातौं महीनामा उपवास बस्थ्यौं र विलाप गर्दथ्यौं, तब के त्यो उपवास मेरै निम्ति गर्दथ्यौं र ? अनि जब तिमीहरु खान्थ्यौं र पिउँथ्यौं, तब के तिमीहरु आफ्नै निम्ति भोजन गर्दैनथ्यौं र ?” कतिको भनाई छ उपवास बस्दा पानी, जुस, र चिया पिउनु हुन्छ ! त्यो गलत हो । अझ कतिले फलफुल आए हुन्छ ! पनि भन्छन् त्यो पनि गलत हो । हामी उपवासको नाम चाहिँ लिने ! तर त्यसको साथ–साथै मासु चिउरा वा मिठो–मिठो भोजन खान्छौं भने त्यो कसरी उपवास हुन्छ र ? त्यस कारण यदि हामी आत्मीक उपवास बस्न चाहान्छौं भने एक दिनमा २४ घण्टा हुन्छ चौबिस घण्टा सम्म कुनै पनि ठोस पदार्थ र तरल पदार्थ खानु वा पिउनु हुदैन । (दानिएल १०:३) “ मैले कुनै मीठो खाना खाइनँ, नत मासु न दाखमद्य मेरो मुखमा पर्यो ।” त्यसै गरि मोशाले भनेका छन् “मैले रोटी वा पानी खाइनँ ।” (व्यवस्था ९:१८)
कति मानिसहरु साथी भाईको लहै–लहमा लागेर उपवास बसेको नक्कल गर्छन ! अनि भन्छन् “आज म उपवास बसेको छु” ! कतिपय अवस्थामा मानिसलाई आत्मीकी पन देखाउन पनि उपवास बसेको नक्कल गछर्न् ! त्यस कारण प्रभु येशूले भन्नु भएको छ । “ जब तिमीहरू उपवास बस्तछौ, तब ढोंगीहरूजस्ता उदासी चेहरा नदेखाओ। किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेका देखाउनलाई तिनीहरू आफ्ना मोहड़ा अँध्यारा पार्छन्। साँच्चै, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमीचाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ, र आफ्नो मुख धोऊ। र तिम्रो उपवास मानिसहरूले होइन, तर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले देखून्, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।” मत्ती ६:१६–१८)
उपवास कसरी बस्ने त?
उपवास कसरी बस्ने भन्ने बारेमा प्रभु येशूले (मत्ती ६:१६–१८) मा भन्नु भएको छ हामी त्यहाँ बाट सीक्न सक्छौं । यदि तपाँई उपवास बस्दै हुनुहुन्छ भने महत्व पुर्ण काम, किनमेल, छलफल वा भोजभतेर जस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुनुहोस् र त्यस्ता कार्यक्रम भएको खण्डमा उपवास नबस्नु नै उपयुक्त हुन्छ । एक दीनको उपवास बस्दा बेलुका आठ बजे खाना खाए पछि भोलि बेलुका सात बजे सम्म केहि नखाई कन र नपिई कन बस्नुहोस् । त्यस पछि प्रार्थना गरेर उपवास फुकाउन सक्नु हुने छ ।
केहि कुराहरु निम्न अनुसार गर्न सकिन्छ ।
१ प्रार्थनाको विषय चयन गर्नुहोस्
२ घरको व्यक्तिगत कोठा, मण्डलीको प्रार्थना कोठा वा सेवा संगतीमा प्रार्थना गनुहोस् ।
३ उपवास सहितको प्रार्थना विषय जटिल छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु होस् ।
४ ताजापन ल्याउन बिहान नुहाउनु होस् ।
५ तपाँई उपवास बसेको कुरा कसैलाई थाहा नदिनुहोस् ।
६ मुहारमा चमक, उज्यालो देखाउनु होस् ।
७ शिरमा तेल लगाउनु होस् ।
८ बाईबल अध्यन गर्नु होस् र हरेक खण्ड मनन् गर्नु होस् ।
९ भजन, कोरस गाउँनु होस् ।
१० परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु होस् ।
केहि व्यवहारीक सल्लाह
तपाई र मैले बुझनु पर्ने कुरा के हो भने हामी उपवास बसेर परमेश्वरलाई कुनै चिज दिन बाध्य बनाउछौं ! भनी सोच राख्नु चाहि मुर्खता हुन्छ । यस कारण हामीले बिचार गर्नु पर्छ की उपवास बसेर हामीले गर्न लागेको कुरा चाहिँ ठीक छ कि छैन ? यदि तपाईको शरीर कम्जोर छ वा रोगी हुनुहुन्छ वा कुनै औषधी खाई रहनु भएको छ भने उपवास नबस्नु होस्, किनकी कत्तिलाई रिङगटा लाग्ने, उल्टी आउने वा कम्जोर भएको कारण बेहोस हुने पनि हुन्छ ! त्यस्तो अवश्थामा ढलेर चोट पनि लाग्न सक्छ । उपवासको कारणले गर्दा तपाईको जीवनमा कष्ट आउने वा बाधा पुग्ने कार्य नबनोस् ! त्यस कारण यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् कि नयाँ नियममा उपवास बस्नै पर्छ भनेर कर गरेको छैन । यदि तपाँईलाई आवश्यकता छ र उपवास बस्नु चाहानु हुन्छ भने बस्नुहोस् तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि याद गर्नु होस् ! कि केहि नखाई कन नपिइ कन बस्न तपाँईको शरीर तयार छ कि छैन ? किनकी यो खेलाची होईन ।
बाईबलमा उल्लेख गरिइको उपवासहरुमा बिचार गर्ने हो भने मोशा, एलिया र प्रभु येशूले लिनु भएको ४० दिने उपवासहरु अलौकीक शक्तिद्वारा भएको पाउँछौं । मोशा परमेश्वरको उपस्तिथीमा थियो ।(व्यवस्था ९:९, १८, २५–२९ र १०:१०) एलियालाई स्वर्गदुतहरुले खाना खुवाएका थिए (१ राजा १९:७,८) र प्रभु येशू पवित्र आत्माद्वारा लगिनु भएको थियो । (मत्ती ४:१) अनी उहाँलाई स्वर्गदुतहरुले सेवा–टहल गरेको थियो (मर्कूस १:१३) यस कारण कुनै अलौकीक शक्ति बिना हामी साधारण मानिसलाई ४० दिन सम्म केहि नखाई कन उपवास वस्नु सम्भब छैन किनकी कुनै पनि ठोस पदार्थ र तरल पदार्थ नखाई वा नपिई कन मानिस धेरै दिन सम्म बाँच्न सक्दैन । त्यसकारण यदि तपाँई उपवास वस्नु चाहानु हुन्छ भने त्यसको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थनामा अगुवाई माग्नु नै असल हुन्छ । तर यो पनि सत्य हो कि परमेश्वरको ईच्छा विपरितका कुराहरु उपवास बसेर पाउँछौं भन्ने केहि ग्यारेन्टी छैन । तपाँईको विश्वास अनि सोहि अनुसारको कामद्वारा मात्र परमेश्वरले दिनु हुन्छ । तपाई उपवास बस्नुहोस् या नबस्नुहोस्, परमेश्वर तपाँईसित बोलिरहनु हुन्छ र तपाँईसितै बास गर्नु हुन्छ । अनि परमेश्वरबाट पाउँने आशिष पनि पाईनै रहनु हुन्छ ।
हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् ।
featured Simon Rai	2014-11-10
निराहार” माने उपवास । Reviewed by Nepali Christians on Nov 10 . के हो त उपवास ? उपवास भनेको कुनै पनि खाने वा पिउने कुरा (ठोस तथा तरल पदार्थ) नखाई कन नपिइ कन एक दिन पुरै वा सो भन्दा बढि वस्ने तरिकालाई नै उपवास भनिन्छ । “गएर के हो त उपवास ? उपवास भनेको कुनै पनि खाने वा पिउने कुरा (ठोस तथा तरल पदार्थ) नखाई कन नपिइ कन एक दिन पुरै वा सो भन्दा बढि वस्ने तरिकालाई नै उपवास भनिन्छ । “गएर Rating: 0
यसैले हाम्रो निर्णय हाम्रो नै हातमा...समय र परिश्रम...